ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သူဌေးများရဲ့ တူညီတဲ့ အလေ့အကျင့် ၆ ခု
လူချမ်းသာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ Bill Gate ၊ Jack Ma ၊ Sir Richard Branson နဲ့ Apple ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Tim Cook တို့အားလုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်တွေရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သူဋ္ဌေးများဖြစ်ကြမယ်။ သူတို့မှာ တူညီတဲ့အချက်တွေ၊ တူညီတဲ့ အလေ့အထတွေရှိကြတယ်။ တကယ်တော့လည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလေ့အထလိုက်ပြီး ဘဝမှာဖြစ်တည်လာကြတာပါဘဲ။ အောင်မြင...
ကြည့်ရှု့သူများ : 4189
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် ၇ ဦး၏ အောင်မြင်ခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်များ
ကနဦးလုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်သူ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လုပ်ငန်းတည်ထောင်မှုအစပိုင်းကာလ၏ သင်ခန်းစာများသည် အောင်မြင်မှုများအတွက် အရေးပါလှသည်မှာ အထင်ကရပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော သင်ခန်းစာများနှင့်အလင်းပြသော အချက်အလက်များသည် အခြားစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် တာစူနေသူများအတွက်အဖိုးတန်လှပေသည်။၁။ ဖောက်သည်နောင်တမရစေရန် အကော...
ကြည့်ရှု့သူများ : 5267
Microsoft Co-Founder Paul Allen ၏ ဒေါ်လာဘီလီယံတန်သည့် သင်ခန်းစာ ၇ ခု
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်းက Pual Allen သေဆုံးခဲ့သည်။ သူသည် Microsoft ကုမ္ပဏီကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ဦးအနေနှင့်ရော၊ PC လုပ်ငန်းကဏ္ဍသစ်တည်ထောင်ဖို့ Bill Gates ကို စည်းရုံးခဲ့သူတစ်ဦးအနေနှင့် PC လောက၏ လက်ရှိအခြေအနေကိုတည်ထောင်ရာတွင် လူပေါင်းများစွာထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။&nbsp; ယင်း၏ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများအပြင် Bill Gates နှ...
ကြည့်ရှု့သူများ : 4067
A NEW commodity spawnsalucrative, fast-growing industry, prompting antitrust regulators to step in to restrain those who control its flow. A century ago, the resource in question was oil. Now similar concerns are being raised by the giants that deal in data, the oil of the digital era. These titans—Alphabet (Google’s parent company), Amazon, Appl...
ကြည့်ရှု့သူများ : 3705
ကြည့်ရှု့သူများ : 5053
ကြည့်ရှု့သူများ : 4239
37 - 42 of ( 68 ) records